अझै स्थापना भएन मिक्वाखोला गाउँपालिकामा बैंक, पाँच सय झिक्न पाँच सय नै खर्च - नेपालबहस
अझै स्थापना भएन मिक्वाखोला गाउँपालिकामा बैंक, पाँच सय झिक्न पाँच सय नै खर्च
| १२:५६:१९ मा प्रकाशित
९ फागुन, काठमाडौं । सेञ्चुरी बैंकले मिक्वाखोला गाउँपालिकामा शाखा कार्यालय स्थापना नगर्दा नगरिकले एउटा योजना सम्पन गर्न पाँच पटकसम्म सदरमुका पुग्नुपर्ने सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७४ सालको असार मसान्तसम्ममा सबै पालिका केन्द्रमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने परिपत्र गरेको थियो । यसै अनुसार तोकिएको बैंकले स्थानीय तहमा शाखा स्थापन गरेर आर्थिक कारोवार गर्दै आएको छ ।
सेन्चुरी बैंकलाई मिक्वाखोलामा शाखा स्थापना गरेर आर्थिक कारोवार गर्न चार वर्ष अगाडि नै परिपत्र गरेको थियो । अहिलेसम्म बैंकले शाखा स्थापना गरेको छैन । गाउँपालिकामा आर्थिक कारोवार नहुँदा ताप्लेजुङ सदरमुकाम जानु परेको मिक्मवाखोलाका लेखा अधिकत प्रशान्त भट्टराइले जानकारी दिए ।
उनले भने, “गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा आर्थिक कारोबार गर्न कठिनाई भएको छ । तलब निकासा गर्न सदरमुकाम चेक बोकेर पुग्नुपर्दछ ।” सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाईसमेत समस्या परेको छ । केन्द्रको सबै अधिकार गाउँ आउँदासमेत कारोवारका लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मिक्वाखोलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले बताए ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत स्थानीय तहमा जाने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकामा बैंकले नहुँदा बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका आर्थिक कारोवारमा समस्या हुर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, “हामीले धेरै पटक सञ्चुरी बैंकलाई गाउँपालिकामा शाखा विस्तार गर्न अनुरोध गरौं । विभिन्न बाहाना गर्दै आएको छ ।” बैंक शाखा स्थापन नगरेपछि एउटा योजनाको लागि सम्झौता गर्न गाउँदेखि पालिकाको कार्यालयसम्म आउनुपर्ने हुन्छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा योजना सम्झौता गरेर खाता खोल्न सदरमुकाम जानुपर्ने हुन्छ । सदमुकाममा खाता खोलेर योजनाको पेस्की रकमको चेक लिन फेरि फर्किइ गाउँपालिकाको कार्यालयमा पग्नुपर्दछ ।
योजना सम्पन हुँदा कम्तीमा पाँच पटक सदरमुकाम पुग्नुपर्दछ । मिक्वाखोलादेखि सदरमुकाम पुग्न ५०० गाडी भाडा लाग्छ । पाँच पटक सदरमुकाम आउनु र गाउँपालिका र्फकन गरी पाँच हजार गाडी भाडा मात्र तिर्नुपर्दछ ।
गाउँपालिकामा बैंक भए एक दिन पनि नलाग्ने समय बैंक नहुँदा एउटा योजना सम्पन्न हुँदा दश दिन समय खर्च गर्नुपरेको छ ।
गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी रकम निकासा गर्न जिल्लातिर आउने गरेका छन् । बैंक नभएकाले आर्थिक कारोवार गर्न निकै कठिनाई भएको गाउँपालिकापालिका–२ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
उनले भने, “हाम्रो कार्यपालिकाको पर्सी बैंठक छ । बैंठकले एक किसिमको आन्दोलन गर्ने प्रस्तावमा छौं ।” समयमै शाखा स्थापना नगरेकाले स्थानीय समुदायलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति पाउन नसकेको वडाध्यक्ष थापाले बताए ।
बैंकका लागि आश्यक उपकरण गाउँपालिका केन्द्रमा पुर्याइसकेको र इन्टरनेट जोड्न मात्र बाँकी रहेको सेन्चुरी बैंकका काठमाडौँका सामान्य सेवा विभाग प्रमुख राजेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र गरेको निकै अगाडि नै हो । विभिन्न कारणले समयमै आफ्नो शाखा स्थापन गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी रह्यो ।” बैंक स्थापना गर्नको लागि गाउँपालिकामा घर भाडामा लिएर सुरुक्षाकर्मीसमेत राखिसकेको र छिट्टै कारोवार शुरु हुने उनले जानकारी दिए।
नबिल बैंकको साथ महामारी तथा स्थानीय स्वास्थ्य संरचनाको अभिबृद्धिमा २ दिन पहिले
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई सिद्धार्थ ग्रुपमा छुट २ दिन पहिले
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकहरुले ए.ए.स.जी.आइ. केयर एण्ड हेल्थ सर्भिसेसमा विशेष छुट पाउने २ दिन पहिले
पुर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा प्रभु बैंकको काउण्टर सञ्चालन ४ दिन पहिले
पाकिस्तानको विस्फोटमा परी पाँचको मृत्यु, पाँच घाइते १३ घण्टा पहिले
महालक्ष्मी विकास बैंकको लाभांश घोषणा, संस्थाको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ७ करोड ! २१ घण्टा पहिले
आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ हुँदै २१ घण्टा पहिले
विश्व बैंकको ५६ करोड अनुदान पुतलीबजार नगरपालिकालाई १६ घण्टा पहिले
स्थानीयवासीले सञ्चालन गरिरहेका अल्लो उद्योग सङ्कटमा १५ घण्टा पहिले
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन रुपन्देहीको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न, केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकसहित ६ शिक्षक सम्मानित ७ दिन पहिले
आगामी चैत १९ गतेदेखि नभीए भलिबल हुने, विजेताले ३ लाख पाउने ३ दिन पहिले
अपहेलनासम्बन्धी मुद्धाको प्रतिउत्तर बुझाउन सर्वाेच्च पुगे प्रचण्ड ७ दिन पहिले
ताप्लेजुङ आगलागी विस्थापितलाई भूकम्प पीडितसरह सहयोग माग ४ दिन पहिले
निर्माणाधिन व्यपारिक बजार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेन ५ दिन पहिले
नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सूचीकृत, कुनको कति कित्ता ? २ हप्ता पहिले
अस्पताललाई विगतमा दिइँदै आएको सहयोग निरन्तर रहने छ : पाकिस्तानी राजदूत २ हप्ता पहिले
अब वृद्धाभत्ता मासिक पाँच हजार पुग्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल ३ हप्ता पहिले
एक वर्षसम्म ज्याला नपाएको मजदूरको गुनासो १ हप्ता पहिले
सुजनको ‘लजाएर’ गीत सार्वजनिक ७ दिन पहिले
नर्भिक अस्पतालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ओपीडी संचालन २ हप्ता पहिले
भक्तपुरबाट लागूऔषधसहित भारतीय पक्राउ २ हप्ता पहिले
बैकिङ कसुर मुद्दामा ५० लाख जरिवाना तोकिएका अभियुक्त पक्राउ ८ महिना पहिले
व्यापार र सडक सञ्जाल विस्तार गर्न विश्व बैंकले दियो ५४ अर्ब ऋण ! ८ महिना पहिले
विप्लव समूहका जिल्ला सेक्रेटरी सहित १८ कार्यकर्ता पक्राउ २ वर्ष पहिले
नेपालगञ्जमा शङ्कास्पद समुदायका सबैको कोरोना जाँच गरिँदै १० महिना पहिले